«Rug beige» Mat / velvet - Moi Mili
Home > "Beige beige" velvet mat / rug
"Beige beige" velvet mat / rug
Ny tsipika vita amin'ny akorandriaka voalohany avy amin'i Moi Mili dia fanampiny tsara amin'ny efitranon'ny ankizy. Ny tsihy dia mandeha tsara mandritra ny lalao voalohany amin'ny zaza ao amin'ny tany na any an-jaridaina. Izy io dia voatsindry matevina amin'ny volosa, plush ary mahafinaritra ilay lamba fikitika sy landihazo voajanahary matevina. Ny loko mainty beige dia misy eran'izao tontolo izao, mifanaraka amin'ny milamina sy fikarakarana voajanahary.
Ny tsihy vita amin'ny malefaka malefaka dia manampy lehibe amin'ny teepee na canopy. Misaotra azy fa mahazo aina sy mahafinaritra ny mahafinaritra. Ny tsihy dia azo ovaina, vita amin'ny volondava sy landy. Feno insulated matevina izy. Azo ampiasaina amin'ny efitra iray, terrace na amin'ny fitsangantsanganana iray. Mety amin'ny karazan-dalao rehetra, hatramin'ny fahazazany.
Lamba: 100% Polyester ary 100% Cotton nohamarinin'ny OEKO-TEX®.
Suhu fanasana: hatramin'ny 30 ° C. Lehibe 115 x 120 cm, hatevina 3 cm.
Default Title - PLN 269.00 PLN